Abavelisi beeMveliso-iFactory yeeMveliso zaseTshayina kunye nababoneleli
Kwi-Champion Machinery, igama eliphambili libe yi-Technology Innovation: sivelisa kwaye sihambisa umatshini obalaseleyo we-extrusion wephepha leplastiki, ibhodi kunye nezixhobo ezincedisayo ezinxulumene nazo. Olunye loluhlu olupheleleyo lwemveliso olukhoyo kwimarike lusenza ukuba siye kuzo zonke iinkalo zobomi. Kwaye umatshini wethu usetyenziswe kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo, ezifana nokupakishwa kwemifuno / iziqhamo, ukupakishwa koluntu, ukupakishwa kwemveliso yombane, izinto zokubhala kunye nezemidlalo, ishishini lokwakha, ishishini lentengiso, iikhemikhali, imboni yemoto, ezolimo, njl.
Izixhobo zodidi lokuqala kukuqinisekisa ukuba isiseko somgangatho wokuqala. I-Champion Machinery inenkqubo yokulawula imveliso epheleleyo, ulawulo olungqongqo ukusuka ekuthengeni, ukulawula umgangatho, imveliso, ukuhlola, umatshini wokuvavanya, ukuthunyelwa.
Khetha umatshini weplastic sheet extrusion ofanele iimfuno zakho, kwaye uqhagamshelane nathi ukuze ufumane uqwalaselo oluneenkcukacha. Uya kuqonda kwaye uzive umgangatho wenkampani ehamba phambili kwishishini, apho bonke abathengi babonelelwa ngezisombululo eziqaqambileyo kunye nokuthembeka okuqinisekisiweyo.
Ukuveliswa kwezixhobo ezifanelekileyo zokulondoloza amandla kunye noomatshini, umthengi kuqala, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, ukufezekisa inzuzo efanayo kunye nokuphumelela. Fumana iChampion, sihlala silapha.
APET / PETG ukusonga / yoshicilelo sheet extrusion line
I-PET sheet extrusion line yetreyi yembewu yezolimo
I-PMMA/GPPS i-Optical Sheet Extrusion Line